Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo maanta ka qeyb-galay munaasabad ka dhacday Garowe – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo maanta ka qeyb-galay munaasabad ka dhacday Garowe
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ka qayb galay Xafladda qalin-jabinta dufcaddii 18-aad Dugsiga sare ee Gambool Garoowe.
Ardayda qalin badaltay ayaa dhan 454 arday, kuwaas oo dhameystay waxbarashadda dugsiga sare. Guddoomiyaha ayaa waxaa kala qayb galay masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dawladda, Madaxweynihii hore ee DPL ahna Senator ka tirsan BJFS Cabdiraxmaan Faroole, Xildhibaan Sharmaarke Cali Cilmi, Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee DPL Cabdullaahi Maxamed Xassan, Wasiirkii hore ee Waxbarashadda DPL ahnaa Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha DFS Cabdi Faarax Juxaa, maamulka Dugsiga Gambool, Maamulka Jaamacadda Bariga Africa, Isimo, nabadoono, waalidiin iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyey ardayda qalin-jebisey, maamulka iyo macalimiinta Dugsiga sare ee Gambool iyo sidoo kale waalidiinta ku soo tabacday ardaydaasi.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa Alle uga baryey ardayda inuu ku anfaco cilmiga ay barteen, waxa uu uuna kula dar-daarmay inay sii waddan Waxbarashadda meel wanaagsana ka gaaran, waxaana uu marlabaad hambalyo u diray dhammaan ardayda qalin-jebisey Dugsiga Gambool.
“Doorashooyinka la filayo iyo saameyntooda wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland”
“Waxaa la rabaa Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka in la waafajiyo Dastuurka”